Samachar Batika || News from Nepal » के बाँ’धेकै अवस्थामा श’व फेला परेको थियो ? के भन्छ जाजरकोट प्रहरी ?
के बाँ’धेकै अवस्थामा श’व फेला परेको थियो ? के भन्छ जाजरकोट प्रहरी ?
पश्चिम रुकुम घ’टनामा बे’पत्ता भएका एक युवाको श’व बुधबार अपरान्ह भेरी नदीमा फेला परेको छ । बुधबार फेला परेको श’व जाजरकोटमा १८ वर्षीय लोकेन्द्र सुनारको हो ।
सामाजिक सञ्जालतिर भा’इरल बनेको तस्विर लोकेन्द्र सुनारको हो । जहाँ उनको शरीर डोरीले बाँ’धेको अवस्थामा भेटिएको छ । यही तस्विरलाई लिएर यतिबेला ह’त्या गरी बाँ’धेर भेरी नदीमा फ’लिएको भन्दै व्यापक आ’लोचना भइरहेको छ । तर के सुनारलाई बाँ’धेर नै नदीमा फलिएको हो त ?
जाजरकोट प्रहरी प्रमुख डिएसपी किशोर श्रेष्ठ भने अहिले नै यसै भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । डिएसपी श्रेष्ठका अनुसार उक्त श’व स्थानीयले निकालेका थिए । प्रहरी पुग्दा स्थानीयले श’व नदीबाट निकालिसकेका थिए । तर युवकको हात बाँ’धिएको अवस्थामा भने थिएन ।
श’वको प्रकृति हेर्दा हातमा कहीँ पनि नि’लडाम देखिँदैन । यदी डोरीले बाँ’धेको हो भने हातमा नि’लडाम पनि देखिनुपर्ने हो । तर श’वमा त्यस्तो केही देखिँदैन ।
यद्यपि स्थानीयले भने हात बाँ’धिएको अवस्थामै फेला परेको दा’बी गरेको डिएसपीको भनाई छ । उनले भने, ‘श’वको उ’द्धार गर्ने काम स्थानीयले गरेका हुन् । प्रहरी पुग्दा हात बाँ’धिएको अवस्थामा छैन । तर उ’द्धार गर्नेले भने हात बाँ’धेको भनेका छन् । खासमा के हो हामी पनि त्यो बुझ्दैछौँ ।’
यद्यपि, प्रहरीले यसबारेमा पनि अ’नुसन्धान भइरहेको भन्दै हात नै बाँ’धिएको अवस्थामै भेटिएको हो वा उ’द्धार गर्दा बाँ’धेर बाहिर निकालेको हो बुझ्ने प्रक्रियामा रहेको बताएको छ ।
उनले भने, ‘श’वको प्रकृति हेर्दा हातमा कहीँ पनि नि’लडाम देखिँदैन । यदी डोरीले बाँ’धेको हो भने हातमा नि’लडाम पनि देखिनुपर्ने हो । तर श’वमा त्यस्तो केही देखिँदैन । हातमा वा शरीरमा लामो समय बाँधेको जस्तो केही पनि देखिएको छैन । तर घटनास्थलको प्रत्यक्षदर्शी, श’वको मु’चुल्का आदि हेरेर नै थप केही भन्न सकिन्छ । अहिले नै बाँ’धेको थियो वा थिएन भन्नु हतार मात्रै हुन्छ ।’श्रोत:रातोपाटी
प्रकाशित मिति १४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १६:१०